Ny fijanona amin'ny endriny mandritra ny dia mandeha dia manao fanatanjahan-tena ihany. Tsy afaka manantena ny hihazona ny hozatrao sy ny fahaizanao ianao rehefa mandeha raha mihinana sakafo be ianao, misotro zava-pisotro betsaka, ary aza manao workout. Ianao ihany no ilainao 15 minitra isa-maraina mba hahita fakana asa mini. Raha ao amin'ny faritra voajanahary toy ny tora-pasika ianao, mivoaha dieny mbola tsy dia be atao loatra, ary manao fampiofanana yoga na tanjaka amin'ny fasika. Azo tanterahina miaraka amin'ny hazakazaka ny kardio, fitsangantsanganana, na milomano mafy. YouTube dia manana horonantsary mahafinaritra maro miaraka amin'ny hevitra fohy, workouts miorina amin'ny fialan-tsasatra mba hitazomana sy hanatsarana ny fahatanjahana mandritra ny dia. Aza manandrana mihanaka ny hariva, satria hisy fiantraikany amin'ny fiotazana maraina ataonao izany ary amin'ny farany ny hatsaran'ny endrika ataonao mandritra ny dia.
matsiro, ny croissant buttery sy ny asa tsara hafa dia mety hialona aminao avy ao ambadiky ny mpifehy, Fa ny tsara kosa dia ilaina hatrany ny mihazona hery am-pahamendrehana. Sakafo mahasalama, amin'ny lafiny rehetra, fa aza manety. Makà voankazo vitsivitsy ho an'ny sakafo maraina, sy salady ho an'ny sakafo antoandro hanampy anao amin'ny endriny maharitra mandritra ny dia. Tamin'izany fomba izany dia nitahiry ny kaloriao ambany loatra ianao mba hahafahanao misakafo kely hisakafo kely.
Raha mijanona amin'ny hotely misy gorodona maro ianao, manana fahafahana tonga lafatra ianao! Raha tokony handray fiakarana, maka ny tohatra! Ity fanovana tsotra ity dia hanana kardio be dia be ao anatin'ny isan'andro, ary amboary anao amin'ny dia lavitra sy mahasalama kokoa. Raha tsy manana tohatra ianao na sidina iray monja, mahita ny sasany ao amin'ny faritra misy anao akaiky ary mihazakazaka midina azy ireo matetika mandritra ny fitsangatsanganana.
Ny fananana io akoho io eo amoron'ny dobo, na mahafinaritra labiera ao amin'ny pub foana. Ny fihoarana azy io dia hiteraka fihenan'ny fitaizanao. Tsy noho ny siramamy ihany fa ny tsy fisian'ny antony manentana ny ampitso ihany. Asio zava-pisotro hafahafa raha maniry ianao, fa andramo hitazomana farafaharatsiny. Aza adino fa ny sotro mamy mafana dia tena be kaloria, toy ny labiera ary divay fotsy mihitsy aza. Ny fiasana azy ireo hanampy azy amin'ny endriny mitoetra mandritra ny fitsangatsanganana dia hahatonga ny fanazaran-tena nomaninao ho sarotra kokoa.
Tianao ve mba hiraketana ny bilaogy lahatsoratra “10 Torohevitra: Mijanona amin'ny endrika nefa mandritra ny dia” tao amin'ny toerana? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary manome antsika voninahitra miaraka amin'ny rohy amin'ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://embed.ly/code?url = ny https://www.saveatrain.com/blog/tips-staying-shape-traveling/ ‎- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Toerana mahafinaritra indrindra Train Trips tany Soisa, tamin'ny Summer
Nandeha lamasinina, Fiaran-dalamby Switzerland, Travel Europe